Ezokuvakasha oLwandle Olufile | Izindaba Zokuhamba
Ezokuvakasha oLwandle Olufile
UMariela Carril | | Amabhishi, Ukuhamba kwe-Asia
Enye yezindawo eziyinqaba emhlabeni yi Ulwandle olufile. Impela uzwile ngakho futhi usibonile isithombe esivela ngezikhathi ezithile sabantu sintanta emanzini aso, sijabule ngokuxaka kwalesosimo.
Ulwandle olufile yabiwa ngu-Israyeli neJordani futhi womabili la mazwe ahlinzeka ngezindawo zabavakashi osebeni lwawo. Uyayazi le ndawo futhi uhlale ufuna ukuya mathupha? Ngemuva kwalokho ungaphuthelwa le ndatshana enolwazi lokuvakasha nolusizo lwe vakashela uLwandle Olufile.
1 Ulwandle olufile
2 Vakashela uLwandle Olufile kwa-Israyeli
3 Vakashela uLwandle Olufile eJordani
Kuyinto a usawoti wamanzi kasawoti ongamamitha angu-430 ngaphansi kogu lolwandle, unezinye Amamitha angama-304 ukujula futhi awusawoti kepha usawoti omkhulu: 34% usawoti (cishe izikhathi eziphindwe kayishumi kunolwandle uqobo). Futhi yingakho abantu bantanta emanzini alo? Ngokwengxenye, kungukuthi ngaphezu kokuba nosawoti omkhulu amanzi aminyene kakhulu. Le nto enelukuluku lokwazi kubantu yimbi empilweni yezilwane nezitshalo ngakho-ke ulwandle muerto.
Ngokukhuluma ngobuchwepheshe kuyichibi elisesiGodini SaseJordani futhi umsele walo omkhulu kunawo wonke uMfula iJordani uqobo. Alidabuli kunoma imuphi umfudlana noma umfula futhi njengoba kungekho mvula, indawo yonke yomile kakhulu. Kepha Uphuma kuphi?
Cishe eminyakeni eyizigidi ezine eyedlule indawo lapho kunechibi kwakuvame ukugcwala amanzi oLwandle iMedithera, ekugcineni kwakheka itheku elixhunywe olwandle okwaqala ukuthi ngesikhathi usawoti obukhulu kakhulu.
Cishe iminyaka eyizigidi ezimbili isondele ngesikhathi izindawo eziphakathi kwalesi sigodi noLwandle iMedithera zazingasafinyelelwa ngamanzi olwandle ngakho indawo yamisa izikhukhula. Ngakho-ke, itheku elikhulu - ichibi lavalelwa laguqulwa laba yichibi. Ukunyakaza kwe-Plate tectonic nokuhluka kwesimo sezulu kwenza konke okunye.
Vakashela uLwandle Olufile kwa-Israyeli
NgesiHeberu waziwa njengeYan Ha Melakh, the Ulwandle kasawoti. Izungezwe indawo enhle yasehlane laseNegev futhi iyingxenye yomngcele wemvelo phakathi kuka-Israyeli neJordani. Ukusuka eJerusalema ufika ngemoto ngehora elilodwa lokuhamba futhi kuyindawo ethandwa kakhulu ukuchitha usuku, uphumule, ube nepikinikini noma uthole ukwelashwa kokuphila kahle.
Kukhona ezinye amabhishi omphakathi emabhange futhi phakathi kokuthandwa kakhulu yi U-Ein Bokek. Kukhona nezinye amabhishi azimeleAbaningi bangabamahhotela kanti nemali yokungena iyakhokhiswa. Kungenzeka ukuthi uhambe unyaka owodwa bese kuba khona nolunye ulwandle futhi omunye unyaka, owodwa kungaphansi. Lokhu kungenxa yokwehluka kwezinga loLwandle Olufile, ngesilinganiso semitha elilodwa noma imitha elilodwa nohhafu we-bilge ngonyaka. Lapho-ke amabhishi ayanyakaza.
La Ibhishi laseKalia Yilena etholakala enyakatho, inebhawa, indawo yokudlela, isitolo sezipho nodaka oluningi izivakashi ezingangena kulo. Ngulwandle lokuqala oluvela eJerusalema ngakho-ke uluthola ngemuva kwemizuzu engu-25 yokuhamba, futhi ukubukwa okungu-360º kwalo kunikeza ngogwadule nolwandle kukhulu. Olunye ulwandle yi IBiankini, eningizimu yeKalia.
Kuyindawo yokungcebeleka enesitayela saseMorocco, enendawo yokudlela enkulu enesitayela saseMoroccan nezinye izindawo zokuhlala. Uma uya ngesikhathi samaholide esizwe kungagcwala kodwa kusamnandi.
La Ibhishi laseNeve Midbar isendleleni yokungena efanayo neBiankini futhi iyindawo yokuhweba okuncane kakhulu emabhishi amathathu asenyakatho oLwandle Olufile ohlangothini lakwa-Israyeli. Inebhishi elihle, izindawo zokosa inyama, ibha, isitolo nomoya wobusha.
La Ibhishi lomphakathi i-Ein Gedi Kumahhala, kunamashawa nesihlabathi esithile kepha futhi kunamadwala amaningi ngakho-ke akuyona indawo ekhululekile ukuhamba. Ibuye ibe nodaka lwemvelo nezikhala eziningi zokupheka kanye nokuphumula. I-Ein Bokek lolunye lolwandle oluseningizimu yoLwandle Olufile olunezindawo zokungcebeleka futhi luthandwa kakhulu ngenkathi ephezulu. Ekugcineni, noma iluphi lala mabhishi lungatholakala luvaliwe okwesikhashana ukuze lulungiswe.
Uma uthatha uhambo oluya kwa-Israyeli kodwa ungaqashi moto, ungahlala ubhalisa eyodwa ngasikhathi uhambo losuku ukusuka eJerusalema okubandakanya ibhasi nokungena ebhishi langasese. Kusuka e-Eilat noma eTel Aviv kukhona nalolu hlobo lwe ukuhamba ngosuku futhi njengoba ukhona ungangeza ukuvakasha eMasada. Wake wayibona leyo movie yakudala yaseHollywood? OkweMasada yigama lenqaba yamaJuda eyayivinjezelwe ngamaRoma futhi bonke ababekuyo bazibulala ukuze bagweme ukuwela ezandleni zabo.
Empeleni, kunohambo oluningi lwezinsuku olungenzeka ngakho-ke qiniseka ukuthi uvakashela iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yakwa-Israyeli.
Vakashela uLwandle Olufile eJordani
Enye yezindawo ezinhle kakhulu eJordani ugu olusempumalanga yoLwandle Olufile, indawo ekwazile ukuhlanganisa izingqinamba zezenkolo kanye nezokuvakasha kokuphila kahle ngokufanayo. Kunemigwaqo emihle, mihle amahhotela, izindawo zokuvubukula kanye nokuhlukahluka kobuzwe lapha ngakho-ke kuyindawo enhle yokuvakasha.
Olunye lwamabhishi amakhulu yi-Amman esemgwaqweni omkhulu, umzila uxhuma i-Amman noLwandle Olufile, amakhilomitha amabili ngemuva kwendawo yehhotela. Ngolwandle lwabavakashi olunamachibi okubhukuda namakamelo okushintsha izingubo ngentengo ephansi. Kuhle ukuchitha usuku futhi abaningi baya ekugubheni izinsuku zokuzalwa, isibonelo.
La indawo yehhotela Yakhiwa yiqoqo lezinkanyezi lamahhotela ezinkanyezi ezine nanhlanu ane ama-spa, amachibi okubhukuda, iziphethu ezishisayo, izingadi amahle nabanye. Khumbula ukuthi leli lizwe lishoda ngamanzi ngakho indawo enjengale, endaweni eyomile, iyamangalisa. Indawo esekhoneni elisenyakatho kakhulu yoLwandle Olufile inamabhishi amahle kakhulu aseJordani namahhotela lapha ngokuvamile avumela abangezona izivakashi ukuthi bakhokhe uma bekhokha cishe i-JD 25 ngosuku.
Izinga lifaka amathawula, ishawa kanye nokungena echibini. Akukho okubi. Uma ungafuni ukukhokha noma yini khumbula ifayela le- ulwandle lwase-amman okungamakhilomitha amabili eningizimu, ihora noma ngaphezulu. Ingabe i- ibhishi eliphansi kufinyeleleka kalula futhi amabhasi afika lapha futhi kunezihlahla ezinikeza umthunzi. Ibhishi linezigaba ezimbili olwandle, zombili ezinamanzi ahlanzekile, izindawo zokudlala nezindawo zokudlela. Umkhakha omkhulu awunalo ichibi lokubhukuda futhi ulula kakhulu.
Enye indawo inephuli futhi kungcono. Ngenkathi emkhakheni omkhulu abesifazane kumele bahlanganiswe kahle, lapha bangagqoka i-bikini, ama-sun loungers namathawula kuyaqashwa futhi kukhona nezikhiya. Ekugcineni, amakhilomitha amabili ukusuka e-Amman Beach yi ibhishi O, enesihlabathi esihle nezimpawu eziningi zesimanjemanje: Amalounger anephedi, ichibi elingapheli, imigoqo, i-spa yokunethezeka nezindawo zokudlela ezine. Uma uya ngezinsuku zamasonto akukho ukubhukuda kodwa ngezimpelasonto kuyagcwala futhi uma ungazange ubhukhe ihhotela awutholi mbhede noma yikuphi.
Lawa ngamabhishi kepha kunezinye izinto endaweni ongeke uziphuthe: amakhilomitha angaba mahlanu ukusuka e-Amman beach yi I-Dead Sea Panorama, phezu kwezintaba namakhilomitha ayisishiyagalolunye phezulu. Yisakhiwo esakhiwe eweni elinokubukwa okumangalisayo koLwandle Olufile. Kukhona nesekethe eyindilinga eqala endaweni yokupaka futhi ikuvumela ukuthi wazi indawo.
Ngaphakathi kusebenza i- Imyuziyamu Yolwandle Olufile Imboza i-ecology, geology, archaeology kanye nomlando wendawo. Yebo, manje kufanele ukhethe ukuthi uzovakashela yini uLwandle Olufile kwa-Israyeli noma eJordani. Yini oyithanda kakhulu?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » travel » Amabhishi » Ezokuvakasha oLwandle Olufile
Yini ongayibona ePuebla de Sanabria